Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Dib u mideynta qoyska
Qoyskaaga kuugu dhow ayaa xaq u leh inay kuu soo guuraan (xaaska, ninka, lamaanaha la wada noolaa, lamaanaha iyo carruurta ka yar 18 jir).
haysato sharci degganaansho ee joogto ah,
haysato sharci deggenaansho oo wakhtigiisu xadaysanyahay oo qaxoonti ahaan ah ama qof si kale ugu baahan badbaado oo la qiimeeyay inaad haysato sababo fiican oo ah in laguu oggolaado sharci deggenaansho oo waaraya,
heshay sharci deggenaansho oo wakhtigiisu xadaysanyahay sababtoo ah caqabado dhinaca fulinta ah, micnhii caqabado hortaagan in la fuliyo go’aan dal ka bixid ama mustaafurin, oo la qiimeeyay in aad haysato sababo fiican oo ah in laguu oggolaado sharci deggenaansho muddo wakhti dheer ah,
heshay sharci deggenaansho oo wakhtigiisu xadaysanyahay sababtoo ah xaalado gaar ah ama khaas ah oo la qiimeeyay in aad haysato sababo fiican oo ah in laguu oggolaado sharci deggenaansho muddo wakhti dheer ah.
Adiga iyo xaaskaaga, saygaaga, lammaanahaaga aad wada nooshihiin ama lamaanahaaga waa in labadiinuba aad ka weyn tihiin 18 jir. Haddii aad haysato sharci deggenaansho oo ku meel gaar ah waa in badanaaba aad is qabteen ama horay u wada nooleydeen. Haddii aad haysato sharci degenaansho oo joogto ah waad isu soo guuri kartaan ama isku guursan kartaan gudaha Iswiidhan.
Marka qoyskaagu codsado dib u mideynta qoyska waa khasab inay caddeeyaan cida ay yihiin.